TOEIC အစီအစဉ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan TOEIC အစီအစဉ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
လည်စည်း TOEIC အစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များ,လျင်မြန်စွာအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌သင်တို့၏အင်္ဂလိပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားထောကျပံ့ပေးလတံ့သော.
အထူးကြပ်မတ် TOEIC အစီအစဉ်၏4ပတ်က(အပေါ်-ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားအဆောင်),သေးငယ်တဲ့လူတန်းစားစနစ်က
စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်စည်းကမ်းသင်ယူမှု TOEIC အစီအစဉ်ကို(10 နာရီတစ်ရက်)
1 နိုင်ငံခြားဆရာမအပေါ် 1(တနေ့တကြိမ်သာ)
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို TOEIC ၏စနစ်တကျသဒ္ဒါနှင့်နားထောင်ခြင်းပေါင်းစပ်ပြီး,ပြောရမယ်ဆိုရင်,ဖတ်နေနှင့်တိုးတက်သောရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရေးသားခြင်း.
အခမဲ့ TOEIC လှောင်ပြောင်စမ်းသပ်(တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်)